Unikum – Kaabadda cusub ee waxbarashada ee degmada Luleå (Somaliska) - Luleå kommun
/ Unikum – Kaabadda cusub ee waxbarashada ee degmada Luleå (Somaliska)
Unikum – Kaabadda cusub ee waxbarashada ee degmada Luleå
Laga billaabo 18 Agoosto 2021 Unikum ayaa ah kaabadda cusub ee waxbarashada ee iskoollada iyo dugsiyada xannaannada ee degmada Luleå. Kaabadda waxbarashadu waxay taageeri doontaa xiriirka uu iskoolku la leeyahay waaliddiinta si aad si muuqata ula socotid horuumarka canuggaaga.
Unikum waxaad adigu ka waalid ahaan:
Barayaasha uga heli kartaa macluumaad
Diiwaanka waxbarashada gudihiisa ugala socon kartaa waxbarashada canuggaaga (dugsi xannaano)
Eeg qiimeynta (Iskoolka)
Waxaa jirto laba si’ oo aad adigu ka waalid ahaan u adeegsan kartid Unikum, si’ ahaan waa adigoo intarneet ku adeegsanaya kumbuyuutar/sagxad akhris/ taleefan gacan ama app-ka Unikum Familj. Waxaan ku talineynaa in la isticmaalo app-ka.
Ma rabtaa in aad app-ka soo degsatid? Google Play (Android) ama App Store (iOS) ku adeegso erayga raadinta ”Unikum Familj”.
Sidee buu waalidku gudaha ku gelayaa?
Bank-Id ayuu waalidku app-ka ku gelayaa. Haddii aadan app isticmaaleyn waxaad geleysaa app-ka adigoo adeegsanaya bogga gelitaanka Unikum
Unikum App Login Select External link.
Bogga gelitaanka ka dooro degmada Luleå Waalid
Unikum luqado kala duduwan ah
Waqtiga iminka ah wuxuu app-ku jiryaa isagoo ah af-Iswiidhish iyo af-Ingiriis.
Waxaad dooran kartaa in aad heshid qoraal lagu turjumay turjumaha Google-ka. Adeeggaas laguma isticmaali karo app-ka, laakin waxaad dooran kartaa in aad taleefanka gacanta ku isticmaashid nooca barta intarneetka ee Unikum ama in aad kumbuyuutar ku gashid.
Fadlan eeg filinka billaw:
Unikum qoyska dugsiga xannaannada: https://youtu.be/-0_o5CXv6LI External link.
(FG! Isagoo af-Iswiidhish ah keliya ayuu ku jiryaa)
Unikum qoyska iskoolka: https://youtu.be/CNMNJcgM1nY External link.
(loo turjumi karaa luqado kale)
Senast publicerad: 2021-10-14Senast uppdaterad: 2022-02-21